Izitayela zemfashini zezingubo zabesifazane ngo-2021
Izingubo ziyinto ebaluleke kakhulu kwabesifazane entwasahlobo nasehlobo. Isitayela sabantu, isitayela sabesifazane kanye nesitayela esisha sobuhlakani yizitayela eziphambili ezithandwayo zezingubo zasentwasahlobo nasehlobo zango-2021. Izitayela zelotus leaf, laminated, pleated, strapless nezinye izitayela zingahlangabezana nezidingo zesitayela se ...
Ukuhlaziywa kwezimpawu zezindwangu ezijwayelekile zama-pajama
Ama-Pajama abelokhu esetshenziswa njengempahla yasendlini, futhi ukuwagqoka kwenza abantu baphumule. Ukulala ngezingubo zokulala kuhle ukulala futhi kungavimbela izifo eziningi. Ngakho-ke, kuyadingeka ukukhetha i-pajama enethezekile. Ngakho-ke, iyiphi indwangu elungele amaphijama? Amaphijama asebusika empeleni angukotini omsulwa, i ...
Ama-pajama kasilika anezinzuzo eziningi
Kunezinzuzo eziningi zokugqoka amaphijama kasilika, ngoba enziwe ngosilika futhi anokuphefumula okungcono. Usilika wangempela unezinzuzo zezempilo. Usilika kamalibhele, owaziwa kakhulu ngokuthi usilika wangempela, ubizwa nge- “fiber queen”. Kuyigugu elingandile elinikezwe isintu ngokwemvelo. Inomlando ...